हामीले हाम्रो अर्थ लोकप्रिय भएको बखत प्रभावशाली भन्न रोक्नु पर्छ Martech Zone
हामीले प्रभावशाली भन्न खोज्नु हुँदैन जब हामी लोकप्रिय छौं
शनिबार, डिसेम्बर 29, 2012 शनिबार, डिसेम्बर 29, 2012 Douglas Karr
मैले यसलाई फेरि देखें ... अर्को २०१२ इन्फ्लुएन्सर सूची। म पूरै सूचीमा जान सक्दिन, किनकि म मेरो अनुहारको नाखुरहरू र्याक गर्दै मेरो कपाल बाहिर तान्न एकदम व्यस्त थियो। यो कुनै प्रभावशाली सूची थिएन, यो केवल अर्को लोकप्रियता सूची थियो। हामी सबै भिन्नता बुझ्दछौं भनेर निश्चित हुन, आउनुहोस् हामी दुई परिभाषित गरौं।
लोकप्रिय: मन पराइएको, प्रशंसा गरिएको, वा धेरै व्यक्ति द्वारा वा एक विशेष व्यक्ति वा समूह द्वारा आनंद।
प्रभावशाली: कसैलाई वा केहि मा ठूलो प्रभाव छ।
त्यहाँ बाहिरका तपाईं बजारका लागि, त्यहाँ दुई बीच ठूलो भिन्नता छ। यो हो आश्रु बनाम आशय। यदि तपाईं धेरै व्यक्ति चाहनुहुन्छ भने हेर्नुहोस् तपाईंको सामानहरू ... लोकप्रियताको लागि जानुहोस्। तर यदि तपाईं धेरै व्यक्ति चाहनुहुन्छ भने किन्न तपाईंको सामान ... प्रभावका लागि जानुहोस्। लोकप्रिय व्यक्ति वा ब्रान्डसँग धेरै व्यक्तिहरू छन् जस्तै उनीहरु। प्रभावशाली व्यक्ति वा ब्रान्डसँग व्यक्तिहरू छन् विश्वास गर्नुहोस् उनीहरु।
अझै बुझ्नुभयो? २०१२ को सबैभन्दा लोकप्रिय आमा मध्ये एक निकोल "स्नूकी" पोलिजी हो। ट्विटरमा, स्नूकीका 2012.१ मिलियन फॉलोअर्स छन्। स्नूकीको l 6.1 को क्लोआउट स्कोर छ। स्नूकी शीर्षकहरू फोटोग्राफी, पिज्जा, बेकिंग, सैन्य, र जुत्ता सामेल गर्नुहोस्। यस वर्ष धेरै सूचीमा स्नूकीको नाम मातृत्वको पर्यायवाची पनि छ।
निस्सन्देह स्नूकी हो लोकप्रिय। तर पनि उनी हुन् प्रभावशाली यी विषयहरूमा बहसपूर्ण छ। मानिसहरू स्नूकीलाई जुत्ता शैलीका लागि नयाँ चीज हेर्न सक्छन् किनभने उनी पप आइकन हुन्… तर यो शंकास्पद छ कि उनले तपाईंको अर्को क्यामेरा खरीद, पिज्जा खरीद, सशस्त्र बलको सवाल, बेकिंग विधि वा प्यारेन्टिंग प्रश्नमा तपाईंको विचारलाई प्रभाव पार्न मद्दत गर्ने छ। म स्नूकीलाई ढक्ढकाइराखेको छैन ... केवल औंल्याउँदै कि स्नूकी एकदम लोकप्रिय छ, तर यसको शंकास्पद प्रभाव छ।
समस्या यी हुन् प्रभाव स्कोरहरू र सूचीहरू वास्तवमै प्रभावकारी हुँदैनन्। Snooki लाई एक प्रभावकर्ताको रूपमा सूचीबद्ध गर्नु सही छैन। यदि म फोटोग्राफी मा एक राय चाहान्छु, म बाहिर खोजी गर्न जाँदैछु पॉल डी अन्ड्रिया। पिज्जा? म मेरो साथी जेम्ससँग जाँदैछु जसले स्वामित्व राख्दछ Brozinni को। बेकिंग? मेरी आमा।
तपाईंले बुँदा पाउनुभयो। तर के तपाइँ मेरो प्रभावकारीहरूको बारेमा केहि याद गर्नुहुन्छ? तिनीहरू प्रसिद्ध छैनन् र लाखौं अनुयायी वा प्रशंसकहरू छैनन्। तिनीहरू विश्वस्त छन् किनकि मैले समयको साथ तिनीहरू प्रत्येकको साथ व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाएको छु र तिनीहरूले मेरो विश्वास कमाए। म छुट गरिरहेको छैन कि लोकप्रिय व्यक्ति प्रभावशाली हुन सक्छन्… प्रशस्त छन्। जे होस्, म छुट गर्दै छु कि प्रभावशाली हुन, एक लोकप्रिय हुनु पर्छ। त्यो केस होइन।
एक व्यक्तिगत उदाहरण को रूप मा, म जान्दछु कि म भएको छु प्रभावशाली मार्केटिंग टेक्नोलोजी स्पेसमा। मैले विगत केही वर्षमा is 500 मिलियन भन्दा बढीको अधिग्रहण र लगानीमा परामर्श लिएको छु र धेरै कम्पनीहरूको लागि केही ठूलो निर्देशन प्रदान गरेको छु। त्योले भन्यो, म अन्तरिक्षमा लोकप्रिय छैन। तपाईले मलाई धेरै सूचीहरूको शीर्ष १० मा फेला पार्नुहुने छैन र म सोशल मिडिया र मार्केटिंगमा घटनाहरू हेडलाइनिंग गर्दै छैन। म विश्वास गर्दछु, यदि सूचिहरू उद्योग नेतृत्व र विश्वासको आधारमा लेखिएका भए, म आफूलाई धेरै उच्च स्थानमा भेट्नेछु। त्यो गुनासो होइन ... केवल एक अवलोकन हो।
हामीले प्रभाव र लोकप्रियता बीच अझ राम्रो छुट्याउन एक मार्ग खोज्नु पर्छ, यद्यपि। बजारहरूले प्रभावकारहरूको पहिचान गर्न र उनीहरूको उत्पादनहरू र सेवाहरू साझेदारी गर्न मद्दत गर्नको लागि प्रभावकर्ताहरूसँग लगानी गर्न आवश्यक छ। यद्यपि, बजारहरूले पनि पैसा बेकारबाट बच्नु पर्छ जुन केवल लोकप्रिय छन् र केहि पनि असर गर्दैन।
प्रभावी ई-कमर्स उत्पाद पृष्ठ डिजाइन गर्नुहोस्
सामाजिक मिडिया: सानो व्यवसायको लागि सम्भावनाहरूको एक विश्व
डिसेम्बर १, २०१ 30 2012:२:6 अपराह्न
मलाई लाग्छ हामीलाई "लोकप्रिय" र "प्रभावशाली" भन्दा पर तेस्रो श्रेणी चाहिन्छ जुन केवल "देखिने" छ। म तर्क गर्दिन कि स्नूकी सबै लोकप्रिय छ ("मन पराउनु भयो, मन पराउनु भयो वा रमाईलो") त्यति नै धेरै देखिने छ।
साझेदारीको लागि धन्यवाद, यद्यपि डग!
डिसेम्बर १, २०१ 30 2012:२:11 अपराह्न
डगलस, तपाईंले देख्नु भएको छ, हामी सानो पक्षी विश्वास गर्छौं कि विशिष्ठ विषय विशेषज्ञहरु बीच लोकप्रियता प्रभाव, विशेषज्ञता, आदि को दिशा मा एक राम्रो प्रोक्सी हो कि राम्रो प्रभाव को मापन को रूप मा तपाइँको राय मा यो कसरी गर्छ?
डिसे 31, 2012 मा 5: 03 AM
नमस्ते @marshallkirkpatrick: डिस्क! सानो पक्षी दिईएको विषयको बिभिन्न आयामहरू प्रदान गर्न त्यस्तो ठूलो कार्य गर्दछ जुन हामी प्रभावकर्ताहरूलाई पहिचान गर्न सक्षम छौं। यहाँ पनि एक आला को लागी लोकप्रियता मा खोज मा खतराहरु छन्। मलाई आश्चर्य छ कि यदि त्यस्ता कार्यहरू जस्तै रिट्वीज, अतिरिक्त साझेदारी, आदि। जुन कार्यको लागि अर्कोलाई प्रभाव पार्नको लागि क्षमतालाई उजागर गर्दछ। दुई ट्विटर खाताहरू दिइयो - एउटा धेरै फॉलोअर्सहरूको साथ र एउटा केहि फलोअरहरू तर अधिक रीट्वीटहरू - म पछि ध्यान दिनेछु।
डिसेम्बर १, २०१ 31 2012:२:4 अपराह्न
डग्लास, यो लेख्न को लागी धन्यवाद। तर अब मसँग यसको अर्थ के हो भनेर सोध्नु छः "सानो पक्षीलेaको विभिन्न आयामहरू प्रदान गर्न यस्तो ठूलो काम गर्छ
दिइएको विषय जुन हामी प्रभावकारीहरूलाई पहिचान गर्न सक्षम छौं। ”
म एक सानो पक्षी बीटा सहभागी हुँ तर म यो मेरो लागि एक लाभदायक उपकरण भएको देख्दिन। स्पष्ट रूपमा मैले केहि हराइरहेको छु र त्यो यो हो जुन तपाईं यस कमेन्टमा प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। के तपाई कृपया अधिक विशिष्ट भएकोमा विचार गर्नुहुनेछ? धेरै धेरै धन्यवाद।
डिसेम्बर १, २०१ 31 2012:२:11 अपराह्न
नमस्ते @ google-8dffa4a27cb92d8c652480f605a5a5bb: डिस्क यसले प्रभावकारीहरूको तात्कालिक सूची उत्पादन गर्दैन, तर यसले मलाई पछाडि उछाल र खाताहरूको अलि बढी विश्लेषण गर्न सक्षम गर्दछ।
सत्य भन्न सकिन्छ, यस उपकरण जस्तै यो पोष्ट लेख्न को लागी प्रेरणा थिएन। यो २०१२ को लागि सबै विवेकी शीर्ष प्रभावशाली सूचीहरू थिए जसले मलाई प्रेरणा दिए। म Klout, Appinions, र सानो पक्षी जस्तै उपकरण को सराहना गर्दै छु - जो राम्रो परिणाम प्रदान गर्न एल्गोरिदम बनाउने कोशिस गर्दैछन्। यो एकदम जटिल समस्या हो!
जनवरी १, २०१2१२::2013 अपराह्न
डगलस - तपाई यस मुद्दामा झण्डा फ्लाइट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर तपाईलाई थाहा छ। हामीले यस विषयको बारेमा मानिसहरूलाई शिक्षा दिन केही समय बितायौं। हामीले भर्खरको उत्पादन गरेको भिडियोमा एक नजर राख्नुहोस् जुन तपाईंको पोष्टको मुटु हुन्छ। http://appinions.com/videos/the-true-meaning-of-influence/ राम्रो काम राख्नुहोस्।